E-Journal: E-Journal, Me and Contributors.
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တားမြစ် ထားသော... at 7:38 PM
နားလည်ပေးပါ ပရိတ်သတ်ကြီးရယ် ကျနော် အဲလောက်ချစ်တာကို . . . အဲ မှားလို့ . . . ကျနော် အဲလောက် အလုပ်များတာကို မရမက ခေါ်နှိပ်စက်ထားတယ်ဂျ . . . စာမူခတွေ ပေးပါ ပေးပါ . . . :D
ဒီလည်း ချစ်တာပါပဲဗျ လူနောက်ကြီး။
တဖွဲ့သားလုံးအတွက် စာမူခတွေ အများကြီးထားခဲ့တယ်။
တယောက်တမျိုးနဲ့ စာအရေးအသားတွေက တကယ်ဖတ်လို့ကောင်းတယ်ဗျ။ ကွန်းမန့်က မရေးရဲလို့ လာချောင်းပြီး ပြန်ပြန်သွားတာ။ ကိုတားမြစ်ထားသောရေ ခင်ဗျားပို့စ်တွေက ဗဟုသုတတွေ တမျိုးမဟုတ်တမျိုး အမြဲရတယ်။ တားမြစ်ထားတဲ့မဒီလေးလည်း ခွင့်လွှတ်နိုင်မှာပါ။ ဒါကတော့ ခွင့်လွှတ်လာအောင် ခင်ဗျားအပေါ်မူတည်တယ်လေဗျာ။ ဘလော့ဂ်မှာ အရေးကောင်းသလို မဒီကိုလဲ ကောင်းကောင်းချော့ပေါ့။
စာမူခတွေ အများကြီးကို လုယူမနေနဲ့အုံးနော်။ နောင်လည်း ဆက်လက်အားပေးနေပါတယ်။
hi. nice presentation.
(နောက်တော့လည်း ရန်ကုန်မြို့မှာ ဘဝတက်လမ်းအတွက် သွားပြီးရင်းနှီးမြုပ်နှံတယ်။
အခုတော့လည်း အဲဒီအရင်းအနှီးတွေနဲ့ အသက်ဆက်နေတာ မချောင်မလည်ပါပဲဗျာ။....)
လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ...။ "ကိုတားမြစ်" ကတော့ "တန်းပစ်" လိုက်တာပဲ နော်....။
ဒဲ့ ကိုမှန်တာပဲဗျို့....contributors တွေကို.....ဟားဟား။ ။
ဟဟ ,,,, ဝက်ရူးပြန်မှာဆိုးလို့ ဒီညတော့ အိပ်ပြီ။ စာမူးခတော့ breakfast ကျမှ လက်တွေ့ကျကျ ယူတော့မယ် ။ ;D
E-Journal က နောင်တော်ကြီးတွေရဲ့ ရင့်ကျက်တဲ့ စာတွေကို ဖတ်ပြီး အမြဲတမ်း အားကျ အတုယူ လျှက်ပါ... post တိုင်း post တိုင်းကို ဖတ်ရတိုင်းလည်း တွေးစရာ တစ်ခုခု
ရတတ်တဲ့အတွက် အစဉ်အမြဲ လေးစားမိရကြောင်းပါ.....။
အခုမှပဲ E-Journal နှင့် ဝိုင်းတော်သားများ အကြောင်းပြည့်ပြည့်စုံစုံ သိရတော့တယ်။ အမြဲ အားပေးနေပါတယ်။
အယ် မှတ်ချက်ရေးပေးရတော့မယ်ဆိုတော့ လဲ
ဘာရေးရမှန်းမသိလို့ ရေးချင်ရာပဲ ရေးပေးခဲ့တော့မယ်။
ကျွန်တော် ကလဲ စာရေးချင်ရက် စက်စက်ယို လို့ ပြောရ
တကယ်တမ်းချရေးတော့ အမြီးမမောက်မတည့် 
လို့ လဲ ( ဖတ်မကောင်းတဲ့ စာသား) မျိုးတွေ နဲ့ ရေးဖြစ်သွားတာလေ။
ကျွန်တော်င်္ဆီနှာ VBT ရေးထားသလို ပဲ စာလုံးပေါင်းတွေ မှားနေတာ ပြင်ပေးချင်တယ်။ ခေါင်းစည်းဖြစ်နေလို့ လေ။ ခက်တာက ACDsee က ပြင်မရဘူး။ နောက်ပြီး Connection က မကောင်းတော့ အဲဒီ
စာသားတွေ က တော်တော် နဲ့ ကာယကံရှင်က မမြင်ရဘူးရယ်။
နောက်များမှာတော့ VBT ပြောသလိုပဲ ပျင်( ပြင်) ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။
ကျွန်တော် လဲ စိတ်ကူးမှာ ပေါ်တာ ရေးနေတာ မို့ လဲ အမှားရှိယင် ခွင့် လွှတ်ပါဗျာ။
ဒါဆို ကိုတားမြစ်ထားသောလဲ အညာသားပေါ့… ပျော်စရာဝိုင်းတော်သားတွေပေါ့နော်… ရေးအားကလဲကောင်းတော့ တကယ်အားကျမိတယ်… အားလုံးကလောင်စွမ်းကလဲထိပါ့… စိတ်ချ… စာမူခမှန်မှန်ပေးမယ်….